famintinana ireo vaovao nisongadina nandritra ny - Anciens Et Réunions
famintinana ireo vaovao nisongadina nandritra ny
FAMINTINANA IREO VAOVAO NISONGADINA NANDRITRA NY HERINANDRO
TETO ANTANANARIVO SY TANY AMIN’NY FARITRA
5 – 11 FEBROARY 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ity tatitra ity dia famintinana amin’ny teny malagasy ireo tsara ho marihina mikasika ny fomba
iresahan’ireo mpanao gazety any amin’ny faritra ireo vaovao nanamarika ny herinandro. Natao
indrindra izany mba hahafahana mamantatra raha anisan’ireo izay mikendry ny fametrahana ny
fampihavanana na kosa amin’ireo izay mandrangitra fikorontanana ny mpanao gazety, ka amin’ny
alalan’ny fomba fiteniny sy ny fomba fiasany no amaritana izany. Ity tatitra ity ihany koa dia
manampy amin’ny fanarahana akaiky ireo endrika korontana samihafa manerana ny nosy taterin’ny
ANTENIMIERAN-DOHOLONA: FIFIDIANANA MPIKAMBANA AO AMIN’NY BIRAO
Matoan-dahatsoratra nanamarika iny herinandro lasa iny ny fivoriana voalohan’ireo mpikambana ao
amin’ny Antenimieran-doholona. Nifantoka tamin’ny fifidianana ireo izay ho mpikambana eo
anivon’ny birao maharitra sy ny fandaniana ny fitsipika anatiny ity fihaonana voalohany ity. Fantatra
ary fa ny Loholona Honoré Rakotomanana no voafidy ho Filohan’izany andrim-panjakana izany. 60
no isan’ireo nifidy azy. Nandritra ny lahateny nataony no nanipihany fa ankoatra ny fandinihana sy
fandaniana lalàna dia manana andraikitra amin’ny fanomezana soso-kevitra ny governemanta eo
amin’ny lafiny toe-karena sy sosialy ihany koa ny loholona.
Ny fahamarinan-toeran’ny fitondrana misy ankehitriny : io no tena nifantohan’ny MaTV.
Nosinganiny manokana ny nifidianan’ny loholon’ny antoko eo amin’ny fitondrana an’i Honoré
Rakotomanana izay olona tsy avy ao amin’izany antoko izany. Araka ny filazan’ny filoha
nasionalin’ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM), ny minisi-panjakana Rivo
Rakotovao dia porofo izao fa misokatra amin’ny ankolafin-kery hafa ny Filohampirenena. Nasian’ny
MaTV resaka manokana ihany koa ny tsy fisian’ny fifandanjana eo amin’ny lehilahy sy ny vehivavy
eo anivon’ny Antenimeran-doholona. Roa ambin’ny folo amin’ireo telo ambin’ny enipolo tokoa
mantsy no vehivavy loholona. Nilaza ho tsy afa-po amin’ity tarehimarika ity ny Filan-kevimpirenen’ny Vehivavy (Conseil National des Femmes). Tsy nanafina ny ahiahiny amin’ity Filoha
vaovao ity kosa ny FreeFM. Nomarihiny tamin’izany fa toy ny efa kabary voaomana mialoha no
novakian’andriamatoa Honoré Rakotomanana. Raha izao fandehan-javatra izao hoy ity fampielezampeo ity dia ho mpanatanteraka sy mpanaiky izay voalazan’ny Filohampirenena fotsiny ireo loholona.
Nanasa ny loholona voafidy tany Mahajanga, andriamatoa Lylison ihany koa ny FreeFM nandritra
ny fandaharana “Anao ny Fitenenana” ka tamin’izany no nanambaran’ity farany fa tsy hisalasala ny
hanakiana ny zavatra tsy mety izy na dia vitsy an’isa aza.
Ny Radio SITENY ihany koa dia nampita ny fahalanian’i
nivalampatra tamin’izany aza.
Honoré Rakotomanana na dia tsy
FAHATSIAROVANA NY 7 FEBROARY 2009
Fito taona katroka zay no nitrangan’ilay hetsi-bahoaka nahafatesana olona maro manoloana ny
Lapan’Ambohitsorohitra sy ny manodidina azy. Isan-taona dia misy hatrany ny fanaterana vonikazo
sy ny hetsika ho fahatsiarovana ireo izay namoy ny ainy manolona ny tsangam-bato efa natokana
hahatsiarovana azy ireo eo Antaninarenina. Maro arak’izany ireo mpikatroka politika tazana teny antoerana tamin’ny 7 febroary farany teo, toa an’andriamatoa Monja Roindefo sy mpikambana vitsivitsy
ao amin’ny antoko Monima. Teny ihany koa ny avy ao amin’ny vondrona Miaraka Amin’ny Prezidà
Andry Rajoelina (Mapar) notarihin’ny solombavambahoaka Christine Razanamahasoa. Tsy diso
anjara tamin’izany koa ny avy ao amin’ny HVM notarihin’ny filoha nasionaliny andriamatoa Rivo
Rakotovao. Ny nahabe resaka tamin’ity fotoam-pahatsiarovana ity dia fandaminana napetraky ny
mpitandro filaminana ny amin’ny tokony hijanonana ela nanoloana ilay tsangam-bato sy teny
Ity fahatsiarovana ny 7 febroary ity no nibahan-toerana tao amin’ny fandaharana Demokrasia
Mivantana tao amin’ny RADIO PLUS. Ny Filohan’ny Fitondrana Tetezamita teo aloha no tena
voatondro matetika ho tompon’antoka tamin’ity raharaha ity satria izy no voalaza fa nitarika ny
vahoaka hidina an-dalam-be sy handeha niakatra teny Ambohotsorohitra, izay efa fantatra fa faritra
mena. Raha ny zava-misy sy iainana ankehitriny hoy ny mpihaino iray dia very maina ireo rà latsaka
tamin’io 7 febroary io. Anisan’ireo voatonona ihany koa ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy satria dia
nilaza izy fa mbola tsy voatendry ho praiminisitra akory Monja Roindefo tamin’iny andro
nandehanan’ny mpitokona teny Ambohitsorohitra iny. Nifantoka betsaka tamin’ny fanakianana ny
fandaminana ny fivezivezena sy ny fandriampahalemana tamin’io andro io kosa i Lalatiana
Rakotondrazafy tao amin’ny Free FM. Nolazainy fa porofon’ny faharefoan’ny fitondrana ireny ka na
ny olona hanatitra voninkazo avy no tsy nahazo mijanona mihoatra ny folo minitra nanoloana ilay
tsangambato. Fampisehoan-kery fotsiny no anton-dian’ny solotenan’ny fitondram-panjakana teny
aminy fa tsy fitiavana sy fiombonana amin’ireo namoy ny ainy, hoy ihany izy.
TOE-KARENA SY SOSIALY
FIANARANTSOA: MBOLA TSY NAHARAY NY KARAMANY NANDRITRA NY
ROAPOLO VOLANA IREO SEFO FOKONTANY
Mimenomenona ireo Sefo fokontany ao an-drenivohitry Betsileo ao noho ny tsy faharaisan’izy ireo ny
karamany roapolo volana. Nampahafantatra tao amin’ny RADIO TSIRY ary ny Lehiben’ny Faritra
Matsiatra Ambony, andriamatoa Tiana Herizo Randrianasolo fa efa ao amin’ny tahirim-bolampanjakana ny ampahany am’izany vola izany ary ny Faritra no hiandraikitra ny fakana azy.
Nomarihany tsara fa ny fahataran’ny fandaminana teo anivon’ny Faritra no nahatonga ny fahatarana fa
tsy fanodikodinam-bola tsy akory. Nanambara kosa anefa andriamatoa Rajaona Andriambololonirina
tompon’andraikitra ao amin’ny tahirim-bolam-panjakana fa tsy ho ekena io fomba fandoavana
karaman’ny sefo fokontany kasain’ny Faritra hatao io, hany ka nanoso-kevitra ny hanome taratasimbola ho an’ny sefo fokontany tsirairay ry zareo.
KERE ANY ATSIMON’NY NOSY
Dia mbola mitana ny sain’ny mpanara-baovao maro ihany koa ny mahakasika ny kere any amin’iny
faritra atsimon’ny nosy iny. Nanambara tao amin’ny RADIO SITENY sy TV SOATALILY ary ny
Birao Nasionaly Misahana ny Fahalavorariana ara-tsakafo (ONN) fa tokony mbola hohamafisina ny
fanampiana ireo miaina ao anaty hanoanana any atsimo. Voakasik’izany ny 30% n’ireo mponina any.
Ny Lehiben’ny Faritra Atsimo Andrefana kosa dia nanentana ny tsirairay mba handray anjara amin’ny
vonjy rano vaky izay notanterahina tao Ankilisoafilira Bazar-be ny zoma sy sabotsy lasa teo. Ny
ben’ny tanàn’Ambalavato ihany koa dia nitaraina ny amin’ny mbola tsy fahatongavan’ny famatsiambola avy amin’ny fanjakana foibe kanefa dia efa miainana tanteraka ao anaty mosary ny vahoaka ao
amin’ny fari-piadidiany noho ny tsy fisian’ny rotsak’orana efa ho telo volana izao. (RADIO
FIAKARAN’NY RANO ANY AVARATRY NY NOSY
Tsy mitsataha-mitombo ireo fahavoazana mahazo ireo mponina any Mahajanga sy Antsiranana. Raha
araka ny tatitry ny TV VARATRAZA dia difotry ny rano tanteraka ny fokontany Cité Ouvrière ka
manao antso avo amin’ireo tompon’andraikitra ny mponina. Tapaka tanteraka moa ny lalana mihazo
ny seranan-tsambo noho ny fihotsahan’ny rindrina iray ka mpitondra moto iray no voatsindry tao
ambanin’ny vato ka naratra tamin’izany.
Raha ny tatitry ny TVM Mahajanga kosa dia nidina ifotony tany Mahajanga II ny Lehiben’ny distrika
sy ny ben’ny tanànan’ny Mahajamba nijery ny fahavoazan’ny mponina any. Nanolotra vary sy
kojakoja ilaina amin’ny fiainan andavanandro ho an’ireo niharam-boina ry zareo tamin’izany diany
Ny TV Plus irery no nanisy teboka manokana mikasika ny fifanolanana misy eo amin’ny filohan’ny
Hafari Malagasy, andriamatoa Jean Nirina Rafanomezantsoa sy ny solombavambahoaka voafidy tao
amin’ny faritra fahadimy sady filohan’ny kaomisionin’ny fananan-tany eo anivon’ny Antenimierampirenena, Naivo Raholdina mahakasika tany eny Ankadimbahoaka eny. Tamin’izany no
nanambaran’ny filohan’ny Hafari Malagasy fa nandrahona azy ilay solombavambahoaka tsy
mifanaraka aminy sady nanendrikendrika azy ho nandray vola taminà karana ka nahazoan’ity farany
ilay tany mampifanolana eny Ankadimbahoaka. Notsipihiny hatrany moa fa miasa ho an’ny vahoaka
ny fikambanany fa tsy manangon-karena amin’izany. Nilaza koa Andriamatoa Jean Nirina
Rafanomezantsoa fa tsy hametraka fiitoriana ary tsy hiaro tena ihany koa manoloana ny fitoriana ny
Hafari Malagasy napetraky ny solombavambahoaka Naivo Raholdina.
Responsables de l’Unité de Monitoring des Médias :
Tiaray RANDRIAMALALA: [email protected]
Mirana RAZAFINDRAZAKA: [email protected]
Honorine Ramisarivelo : [email protected]
Site web: www.incipals.eu
Samy resy lahatra izy ireo fa tena milofo amin’ny fianarana tokoa ny ankizy, satria na dia mahantra aza izy ireo dia mampitombo fahalalana any amin’ny tranomboky. Nifanaiky ireo ONG ireo fa mba ham...
miasa noho ny resaka politika. Ny “Kasa” kosa tsy toa izany. Tsy mialon-jafy. Ny zotra “Kasa” dia tsy mialon-jafy, izany hoe, raha ny tokony ho izy, misokatra ho an’ny Malagasy Ampielezana rehetra ...
hataontsika izao. Koa iangaviana hanangan-tànana izay handray fitenenana handraisana ny anarany. Ny Solombavambahoaka aloha, avy eo vao ny Governemanta. Iza no manana fanamarihana na fantsiana mika...
ny lohako teo amin'ny ondana aho rehefa hatory satria nivonto sady nanaintaina ny hodidohako.Tamin’io andro io dia nitodika tany amin'ny raiko aho ary nibanjina azy teo amin'ny masony, sady nangovi...
"Ny iraky ny Fiangonan'ny Nazareana dia mamaly ny Iraka Lehibe an'i Kristy manao hoe: 'Koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra'" (Matio 28:19). "Hampandroso ny Fanjakan'And...